ईमरान र अभिषेकले छाडेको सिनेमाबाट रानी मुखर्जीको कमब्याक ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:38:43
जापानी समय : 03:53:43
ईमरान र अभिषेकले छाडेको सिनेमाबाट रानी मुखर्जीको कमब्याक ?
11 January, 2017 18:22 | कला/मनोरन्जन , वलिउड | comments | 18750 Views
अभिनेत्री रानी मुखर्जी २०१४ मा सिनेमा ‘मर्दानी’मा काम गरेपछि पर्दाबाट गायव भईन् । त्यो बीचको समयमा उनले एक सन्तानलाई जन्म दिईन र आमाको अनुभव बटुलिन् ।
आमा बनिसकेकी रानी केही समय त मिडियाबाटै हराईन् । तर अब भने उनी पर्दामा कमब्याक गर्ने तयारीमा छिन् । निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्राको सिनेमाबाट रानीले कमब्याक गर्न लागेको खबर भारतीय अनलाईनहरुमा छापिएको छ ।
यो सिनेमाका लागि रानी पहिलो रोजाई भने हैनन् । रानीले अभिनेता ईमरान हाशमी र अभिशेक बच्चनले छोडेको सिनेमाबाट कमब्याक गर्दैछिन् । सिद्धार्थ पहिले यसमा ईमरानलाई लिन चाहन्थे । ईमरान पनि यसमा काम गर्न ईच्छुक थिए । तर बिशेष कारणवश ईमरानले यसमा काम गर्न सकेनन् । ईमरानले काम नगर्ने भएपछि फिल्मको प्रस्ताव अभिनेता अभिशेक बच्चनलाई गयो । तर अभिशेकले यसमा काम गर्न अनकन गरे । दुईवटा अभिनेताले यसमा काम नगर्ने भएपछि सिनेमाको कथा सुनाउन सिद्धार्थ, चोपडा हाउसमा पुगे ।
त्यहाँ पुगेर सिनेमाको न्यारेशन सुनाईसकेपछि रानी मुखर्जी यसमा काम गर्नको लागि तयार भईन् । रानीले सिनेमामा काम गर्ने भएपछि सिनेमाको कथा नै उल्टिएको छ । पहिले मुख्य भूमिकामा अभिनेतालाई देखाउने तयारी थियो भने अब अभिनेताको ठाउँमा अभिनेत्री देखिनेछिन् । यो फिल्मको कथा एक बालिकाको वरिपरि घुम्छ जो सानोमा सामान्य कुराकानी गर्दा गर्दै आक्रोश हुन्छिन् । तर पछि गएर सफल शिक्षिका बन्छिन् ।
चलचित्र ‘ग्रेट लभ’ मार्फत डेब्यू गर्दै शाश्वत श्रेष्ठ
‘’पण्डित बाजेको लौरी’’ ट्रेलर रिलिज
चलचित्र ‘बोबी’ ट्रेलर सार्वजनिक
‘मिष्टर एण्ड मिस एसईई ग्ल्याम ‘
महेन्द्र रायमाझीको आवाजमा ‘हेर यी आँखामा’ सार्वजनिक